သက်တန့်ချို: Doctor-Patient Relationship (သို့မဟုတ် ) ဘတ်လဘိုင်လိုက်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်
မိုးနတ်ကြယ်စင် January 31, 2013 at 9:21 PM
May Khin February 2, 2013 at 4:35 PM
ဟီးရိုးမဟုတ်ကြသော ဆရာဝန်များနှင့် ဆရာဝန်ကို အသက်ပုံနှင်းအပ်ရသော လူနာများကြားက နားလည်စာနာနွေးထွေးသော ဆက်ဆံရေးတစ်ရပ်ကိုသာမြင်တွေ့ချင်နေမိတော့သည် ။
မငုံ February 20, 2013 at 12:42 AM
လူနာရှင်ဘက်ကလဲ ကိုယ့်အသက်၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေအသက်ကို ယုံကြည်စွာနဲ့ အားကိုးတကြီးပုံအပ်ထားကြပါတယ်။ လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်. ယုံကြည်တယ်လေ. ဒါမဲ့လေ နတ်မှမဟုတ်တာ. အရာရာထိတိုင်း ရွှေဖြစ်တာမှမဟုတ်တာ..ကြိုးစားပေမဲ့ မကယ်လိုက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေဆို လက်ခံပါတယ်..သို့ပေမဲ့..ပညာဂုဏ်မောက်လွန်းသူ၊ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အထင်ကြီးလွန်းသူ၊ ငါမရှိရင် ငါမလုပ်ပေးရင် ငါလုပ်ပေးမှဖြစ်တာမလား ဆိုပြီး အပေါ်စီးကနေကြည့်မြင်နေတဲ့ ကိုယ်ယုံကြည်သူတွေကိုတော့ ကြောက်မိတယ်. ဆရာဝန်နဲ့လူနာ.ဆရာဝန်နဲ့လူနာရှင်. အားလုံးကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ ယုံကြည်နိုင်ကြပါစေ။